Ireo mpamatsy paty voatabia am-bifotsy - Mpanamboatra voatabia voatabia am-bifotsy
Ny paty voatabia dia iray amin'ny sakafo isan'andro. Izy io dia mety hahatonga ny sakafo ho matsiro sy mahasalama kokoa ho an'ny olona. Afaka manao kalitao isan-karazany isika araka ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny fenitry ny kalitaon'ny tsena, ny paty dia tomaty loko mena voajanahary voajanahary, 100% tsy misy additives, matevina ary tsy misy rano. Afaka manao paty voatabia tsara GINO izahay. Ny "kalitao voalohany" no fototray lalandava hanodinana ny paty voatabia. Ny orinasanay manarona faritra 58.740 metatra toradroa, ny famokarana isan-taona dia 65.000 taonina, ...